Maxey bisadeeydu u cuntaa si xamaasad leh? | Bisadaha Noti
Maxey bisadeeydu u cuntaa si xamaasad leh?
Maria Jose Roldan | | Cuntada, Riyooyin
Waqtiga cunnadu waa inuu ahaadaa mid xasilloon qof walba, ha lahaado laba ama afar lugood. Laakiin mararka qaarkood waxaan la kulannaa bisad u muuqata inay ku deg degayso dhammeynta cunnadiisa oo ay billaabeyso inay waxyaabo kale qabato. Maxaa laga qaban karaa kiisaskaas?
Markay bisadaydu si xamaasad leh wax u cunto, waan ogahay in la gaadhay waqtigii walwalka. Caadi ma ahan inaan wax badan cuno oo si dhakhso leh u cuno. Si aan kuu caawiyo, waa muhiim inaad marka hore ogaato sababta aad u sameyso.
1 Maxey bisadeeydu u cuntaa si xamaasad leh?
1.1 Waxay ahayd bisad agoon ah
1.2 Dhibaateyn dhibaato ah
1.3 Dabeecad ahaan waa u welwelsan yahay
1.5 Cunto tayo yar
1.6 Caajis iyo dhibaatooyin xagga shucuurta ah
1.7 Sababaha kale
2 Maxaa la sameeyaa si laguu caawiyo?
Marka xigta waxaan arki doonnaa sababaha si aad u fahanto sababaha kale ee ay bisadaadu u yeelan karto cunno qabatinkaan waana sababta uu sida aadka ah u cunayo.
Waxay ahayd bisad agoon ah
Bisadda aan hooyadu quudin, sababaha ay doontaba ha noqotee, badanaa wey weynaataa iyadoo siineysa aragti ah inay had iyo jeer gaajooto. Tani waa sababta oo ah inta aan dhalada ku quudinayno, aad ayaan uga ilaalinay wax badan oo aanaan doonayn inay gaajooto hal daqiiqo, taas oo macquul ah. J) Haa, Kan yar wuu weynaadaa isagoo og inuu had iyo jeer cuno ka heli doono gacantiisa isla markaana aysan jirin cid wax uga sheegi doonta wax ku saabsan cunista, sidaas darteed wuu ka faa'iideysanayaa.
Si kastaba ha noqotee, hooyadu waxay u fasaxdaa carruurta yaryar inay gaajooto. Waa inaad sameysaa hadaad rabto inay bartaan inay raadsadaan cunadooda kaligood maadaama aysan si joogto ah kuula joogi doonin.
Dhibaateyn dhibaato ah
Haddii guriga dhexdiisa uu ka jiro noole kale (bisad, eey ama qof) kaligiis kaa tagi doonin, taasi waa, in uu ku eryanayo ama ku daawanayo mar walba, oo doonaya inuu had iyo jeer kugu haysto gacmahaaga oo, marka la soo koobo, kuu oggolaan maayo inaad qaadatid nolol deggan oo caan ku ah bisadda, waxay dareemi kartaa inay haysato waqti aad u yar oo ay wax ku cunto. Markuu ugu dambayn daqiiqad helo dhaqso ayuu wax u cunaa maxaa yeelay wuu ogyahay in goor dhow ama goor dambe in mar kale loo cagajugleeyo.
Dabeecad ahaan waa u welwelsan yahay
Bisadaha neerfayaasha u muuqdaan inay si dhakhso leh u cunaan cuntadooda inta kale, maahan inay nolol xun ku socdaan laakiin si fudud maxaa yeelay waa sidaas oo kale. Waa inaad samirto oo aad isku daydaa inaad xal raadiso si aad uga fogaato ceejinta.
Bisaddaada waxaa laga yaabaa inay ku waashay cuntada maxaa yeelay iyadoo aan la dhergin, maxaa yeelay wuu gaajaysan yahay oo markaad cunto siiso wuxuu ku siganayaa inuu neefta ka qaado si uu wax walba u dhammeeyo.
Waxaa laga yaabaa inay tahay maadaama uu aad u gaajaysan yahay ama sababta oo ah haddii aad bisadaha ka sii badan tahay, marar kale wuxuu u tagay gaajo markii bisadaha kale ay wax ka cuneen quudintiisa. Marka Waa muhiim in haddii aad ku haysato wax ka badan hal bisad guriga, mid walbaa uu leeyahay quudintiisa iyo cabitaankiisa.
Waxaa macquul ah in hadhow, qof walba uu wax ka cuno halka qof kasta oo kale wax ka cuno, laakiin waxaa jiri doona wax ku filan si qof walba uu u cuno qaybtiisa saxda ah oo uusan u gaajoon.
Caadi ahaan bisaduhu waxay cuni karaan dalab dhib la'aan maxaa yeelay waxay siiyaan raashinkooda wayna joojiyaan markay qancaan. Laakiin haddii aad leedahay bisad aad u cunno badan, markaa waa inaad siisaa qiyaasta cuntada.
Haddii tani kugu dhacdo, waxaad ogaataa in bisaduhu wax cuni karaan hal mar ama laba jeer maalintii oo ay iyaga ku filnaan doonto haddii qadarku ku filan yahay.
Cunto tayo yar
Waxaad u maleyn kartaa in tan aan u maleynayo inaad siineyso bisadahaagu ay yihiin kuwo tayo fiican leh, laakiin dhab ahaantii waxaa ka maqan nafaqooyinka iyo fiitamiinnada lagama maarmaanka u ah si ay u helaan caafimaad wanaagsan ama ugu yaraan ay u dareemaan inay ku qanacsan yihiin cunista.
Hadday sidaas tahay, haddii kan aan u malaynayo inaad siinayso bisaddaadu ay tayadeedu hooseyso, waa iska caadi inay raadsato ama weydiisato cunto dheeraad ah. Si fiican uma quudineysid isagu wuxuu ubaahan yahay nafaqooyin! Kala hadal dhakhtarkaaga xoolaha wixii talo ah ee ku saabsan quudinta oo runtii ka dhigaysa isaga inuu ku qanacsan yahay isla mar ahaantaana, ka taxaddar caafimaadkaaga gudaha iyo dibaddaba.
Bisaduhu waxay u baahan yihiin borotiin iyo cunno tayo wanaagsan leh. Dhib malahan haddii aad da 'yar tahay ama ka weyn tahay, cuntada waa inay ahaato mid ku habboon baahiyahaaga jireed, maskaxeed iyo shucuureed.
Sidee loo doortaa cuntada bisadaha ugu fiican?
Caajis iyo dhibaatooyin xagga shucuurta ah
Waxa kale oo dhici karta in bisadaadu rabto inay wax cunto maxaa yeelay wuu caajistay, ama inuu leeyahay dhibaato xagga shucuurta ah oo loo yaqaan "dabeecadda cunno-xumada aan caadiga ahayn". Tan macnaheedu waa taas bisaddaadu waxay u cuntami weyday cuntada, oo leh dhammaan cawaaqibka ay tani ku yeelan karto caafimaadkaaga.
Haddii tan kugu dhacdo adiga waa inaad u tababbarto inuu wax ka beddelo habdhaqankiisaHaddii loo baahdo, waa inaad la hadashaa khabiir ku takhasusay dhaqanka si aad u rogto dhaqankan. Laakiin tani waxay dhici doontaa oo keliya haddii aad leedahay astaamo sida:
Cunitaanka ka dib wuxuu rabaa inuu cuno cunnada xoolaha kale iyo xitaa taada
Ku bood miiska si aad u cuntid waxa saaran
Wuxuu umuuqdaa inuu quus taagan yahay markaad cuntada galinayso quudkiisa
Wuxuu raadiyaa feejignaan joogto ah milkiilayaashooda
Cun walxaha ama calalin xitaa haddii aysan cunto ahayn
Calaamadahaani waa kuwo aad muhiim u ah in lagu xisaabtamo maxaa yeelay sidan ayaa aad awoodi doontaa inaad ogaato inay runti tahay waxa kugu dhacaya si aad u daawayso sida ugu dhakhsaha badan.
In kasta oo waxa ilaa hadda aan aragnay ay yihiin sababaha ugu waaweyn ee ay bisaddu u cuni karto iyadoo welwelsan, haddana waxaa jira kuwo kale oo aynaan ahayn inaan meesha ka saarno:
Wuxuu jecel yahay cuntadiisaAad buu ugu riyaaqaa oo isagu ma caawin karo laakiin wuu liqayaa sida ugu dhakhsaha badan ee uu sameeyo.
Wuu bukaa: Waxaa jira cuduro qaar, sida hypothyroidism, oo la ildaran isku dheelitirnaan la'aanta tayroodhka ama cudurka macaanka, oo astaamahooda ka mid ah kororka rabitaanka cuntada. Laakiin waa inaadan ka baqin inbadan oo cudurradan ah waa la daaweyn karaa.
Maxaa la sameeyaa si laguu caawiyo?
Marka sababta la ogaado, waxaa la joogaa waqtigii wax laga qaban lahaa. Mid ka mid ah waxyaabaha inta badan sida ugu fiican u shaqeeya ayaa ah iibsashada quudin gaar ah oo loogu talagalay xayawaanka walaacsan, sida tan:
Sidaas yar waa inaad xoogaa shaqeysaa si aad u hesho cuntadaada, taas oo kugu qasbi doonta inaad si tartiib ah wax u cuntid. Laakiin intaa waxaa sii dheer, waxaa aad muhiim u ah in la helo meel aamin ah oo xasilloon oo uu isagu ku quudin karo isaga oo aan wax walwal ah ka qabin, sida qolkaaga jiifka tusaale ahaan.
Sidoo kale maskaxda ku hay in haddii lagu dhibaateeyo waa inaan dhisno xaddidyo cayiman si qofkasta oo guriga jooga uu ugu noolaado si farxad leh. Waa inaan ixtiraamnaa xubin kasta, haddii kale dhibaatooyin ayaa soo bixi doona. Haddii aad shaki ka qabto sida loo fahmo bisaddaada, gudaha maqaalkan Waxaan ku siineynaa furayaasha si xiriirkiina u noqdo mid labadiinaba waxtar u leh.
Haddii midkoodna aysan wax u tarin bisaddaada, ka dib la hadal dhakhtarkaaga xoolaha ama khabiir haddii ay wax hagaagaan. Dhanka kale, waad ku hanan kartaa tilmaamahan:
Fiiro gaar ah u yeelo oo waqti tayo leh la qaado bisaddaada
Sii cunto tayo wanaagsan leh
Sii cunno qoyan dhowr jeer usbuucii marka lagu daro cunnadiisa qallalan
Ku dar biyo badan oo uu cabbo oo ha ku fuuqbixin oo dareemo dhereg dheer
Joogtee qaar ka mid ah jimicsiga maalinlaha ah (tusaale ahaan laba jeer maalintii), ama sii waqtiyo badan maalintii, laakiin qaddar yar
Haddii uu cunto kaa codsado, iska dhegayso
Isku day inaad la qabsatid waqtiyadaada cuntada si ay u lajaanqaadaan kooda si aad iskaga ilaaliso isku dhaca fitnada
Ha siinin cunto dheeri ah maxaa yeelay waxay kaa dhigeysaa inaad ka xumaato
Tilmaamahan ayaa bisaddaadu ka fiicnaan doontaa, hubaal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cuntada » Maxey bisadeeydu u cuntaa si xamaasad leh?
Dhammaan macluumaadka lagu bixiyo boggan waa kuwo aad waxtar u leh: oo kooban, sax ah oo leh saaxiibtinnimo luqadeed. Mahadsanid!
Jawaab ku bixi Marcelo, Rosario, Argentina
Waad ku mahadsantahay ereyadaada, Marcelo 🙂.
Sababaha loo yaqaan 'feline alopecia'